IAmazon Fire TV Stick Max, ngoku eneWiFi 6 kunye neHDR | Iindaba zeGajethi
IAmazon Fire TV Stick Max, ngoku eneWiFi 6 kunye neHDR
UMiguel Hernandez | 03/11/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 04/11/2021 09:33 | ngokubanzi, Reviews
I-Amazon iyaqhubeka nokubheja kuluhlu lweTV yoMlilo ukuze ilawule, ukuba ayikakwenzi oko, imarike yabadlali bemultimedia kumabonwakude. Nangona kuyinyani ukuba i-Smart TV eyakhelwe kwiithelevishini zamva nje inobuchule kakhulu, ezi zixhobo ezincinci ziyaqhubeka zisinika inkululeko kunye nokuhambelana okunzima ukuhambelana.
Sihlalutya iAmazon Fire TV Stick Max entsha, ubhejo lwamva nje lweAmazon ngoguqulelo lwayo oluhlangeneyo ngoku ngeWiFi 6 kunye nabo bonke ubuchwephesha beHDR. Siza kujonga kuzo zonke iindaba eziphakanyiswa yile mveliso intsha yeAmazon kwaye ukuba kufanelekile ngokwenene xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezingabizi kakhulu zosapho olunye lweTV yoMlilo.
2 Umyalelo ohlaziyiweyo kakhulu
4 Ukusebenzisa i-FireOS kwiTV yakho
IAmazon iyaqhubeka nokubheja kwezi ntlobo zeemveliso ngenxa yentlonipho yokusingqongileyo, I-50% yeeplastiki ezisetyenziswe kulo mdlali weendaba zokusasaza zivela kwi-post-consumer material recycled. I-20% yeeplastiki ezisetyenziswa kwi-remote control zivela kwi-post-consumer material recycled.
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi iadaptha
I-USB ukuya kwintambo ye-microUSB
5W iadaptha yamandla
Imilinganiselo yesixhobo i 99 x 30 x 14 mm (isixhobo kuphela) | 108 x 30 x 14 mm (kuquka isinxibelelanisi) kubunzima obungaphantsi kwama-50 grams.
Umyalelo ohlaziyiweyo kakhulu
Zombini ngobunzima kunye nemilinganiselo, ulawulo luhlala luphantse lufane nohlobo lwangaphambili, Ngaphandle koku, incitshisiwe ngesentimitha ubude, ngaphambi kokuba sibe ne-15,1 cm kulawulo lwendabuko ngelixa ulawulo olutsha luhlala nge-14,2 iisentimitha ubude. Ububanzi buhlala bunjalo kwiisentimitha ezi-3,8 xa zizonke, kwaye ubukhulu buncitshisiwe kancinane ukusuka kwiisentimitha eziyi-1,7 ukuya kwiisentimitha eziyi-1,6.
Itshintsha iqhosha ukucela i-Alexa, ethi nangona igcina ubukhulu bayo ngoku buluhlaza kwaye ibandakanya ilogo yomncedisi weAmazon, eyahlukileyo kumfanekiso wombhobho owawubonisa ukuza kuthi ga ngoku.
Okokugqibela, ezona zongezelelo zine ziphawuleka kakhulu ziyinxalenye engezantsi, apho sifumana amaqhosha azinikeleyo, anemibala kunye nobukhulu obubonakalayo. Ukufikelela ngokukhawuleza: I-Amazon Prime Video, iNetflix, iDisney + kunye neAmazon Music ngokwahlukeneyo. La maqhosha awanakulungelelaniswa ngalo mzuzu. Ke izinto, ulawulo luyaqhubeka lunikezela ngeemvakalelo ezikrakra kulo mba. Oku kungqubuzana ngokuthe ngqo, umzekelo, uluhlu oluphakathi kunye nolawulo oluphezulu oluvela kwi-Samsung okanye i-LG kwaye luvelise ukuvakalelwa okungaqhelekanga kutshintsho.
Kule meko iAmazon Fire TV Stick Max Iyamangalisa ngobukhulu bayo kunye nenyaniso yokuba igcina zonke itekhnoloji zokuzala ze amazon fire tv cube, inguqu ephezulu yesiphelo seemveliso ezifanayo zeAmazon. Ngale nto sithetha ukuba iyahambelana nesisombululo se-4K, iyahambelana neenguqulelo ezahlukeneyo zeHDR, phakathi kwayo yiDolby Vision, kunye nesandi esibonakalayo seDolby Atmos esiba sefashonini mva nje.
Inkqubo: I-Quad-core 1.8GHz MT 8696
Imveliso ye-HDMI ARC
Ngokwenxalenye yayo, ikwanoMfanekiso kuMfanekiso wokuSebenza kwaye kule nto ihamba kunye 8 GB iyonke yokugcina (I-8GB engaphantsi kweCube yeTV yoMlilo kunye nomthamo ofanayo nabantakwenu abancinci) ngokunjalo 2GB ye-RAM (iyafana neCube yeTV yoMlilo). Ukwenza oku, sebenzisa a I-1,8 GHz CPU kunye ne-750 MHz GPU iphezulu kancinane kunoluhlu lwe-Fire TV Stick kodwa ngandlel’ ithile ngaphantsi kwakhona kwangaxeshanye kwiCube yeTV yoMlilo. Konke oku kuthetha ukuba le Fire TV Stick Max inamandla angama-40% ngakumbi kunolunye uluhlu lwe-Fire TV Stick ubuncinci ngokweAmazon uqobo.
Kuyamangalisa ngeli xesha ukuba baqhubeke bebheja kwi-microUSB njengendawo yokunxibelelana ukunika amandla kwisixhobo, esingayi kuba nokwenzeka ukuba siqhube kwizibuko le-USB yeethelevishini ezininzi, nangona kunjalo, Baneenkcukacha zokusinika itshaja ye-5W ebhokisini. Ukudityaniswa kwekhadi lenethiwekhi ye-WiFi 6 ngokuchanekileyo yenye yezona zinto zinkulu.
Ukusebenzisa i-FireOS kwiTV yakho
Ngokumalunga nokusonjululwa komfanekiso, ngaphandle kwemida siya kuba nakho ukufikelela i-UDH 4K ngezinga eliphezulu le-60 FPS. Oku akuthethi ukuba ngenene siya kukwazi ukonwabela intsalela yesiqulatho kwezinye izisombululo esikwaziyo ukuzivelisa kwakhona. Iziphumo kwiimvavanyo zethu kunye nababoneleli bomxholo wokusasazwa kwe-audiovisual zilungile. INetflix ifikelela kumanqanaba esisombululo se-4K HDR ngokutyibilikayo kwaye ngaphandle kweejerks, inika iziphumo ezibukhali kancinci kunezinye iinkqubo ezinjengeSamsung TV okanye iwebhuOS.
Eyakhe kunye neNkqubo yokuSebenza yobuqu imnceda kakhulu. Isebenza ngokukhawuleza kancinci kunoluhlu loMlilo lonke, nkqu nezicelo ezinzima kakhulu kunye ne-emulator ngamaxesha athile.
Le Fire TV Stick 4K Max ibekwe kwi 64,99 euro, nto leyo umahluko of € 5 kuphela xa kuthelekiswa noguqulelo 4K, ngokunyaniseka kufanelekile ukuhlawula € 5 ngaphezulu ukuba iimpawu ezahlula zombini. Ukuba kwelinye icala sifunda ukuthenga intonga yeTV eqhelekileyo kuba asifuni ngaphezulu komxholo we-Full HD, umahluko uyamangalisa. Ngokombono wam, kusengqiqweni ukubheja nokuba kwi-Fire TV Stick nge-39,99 euros, okanye yiya ngqo ku Fire TV Stick 4K Max for 64,99 euro ukufumana amava apheleleyo aphezulu.
Umlilo weTV TV 4K Max
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 3 ukusuka kwi2021
Utshintsho lokugqibela: NgoNovemba 4 ukusuka kwi2021
Icwecwe kwaye kulula ukuyifihla
I-OS esebenzayo kwaye iyahambelana kakhulu neenkqubo ezahlukeneyo
Isebenza ngaphandle kweejerks, ilula kwaye ikhululekile
Izinto zomyalelo zingaphuculwa
Ayisebenzi nge-USB yeTV
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IAmazon Fire TV Stick Max, ngoku eneWiFi 6 kunye neHDR
Tronsmart Studio Wireless Somlomo, uhlalutyo kunye nokusebenza